SomaliNet Magazine: AGOOSTO 2002
Qaybtii 4aad Ahmed iyo aabihii markiiba waxay soo gaareen meeshii uu Basku istaagayay oon ka fogayn. Waxay sugaanba waxa yimid Baskii oo aan aad u buuxin, dad aad u tiro yarna saaran yihiin, maxaa yeelay waa waqtigii qadada oo cid magaalada ka imanaysa mooyee aanay jirin cid magaalada tagaysa
2-2-1977-kii, maalin ka hor intuusan Mengiste xukunka qabsan ayaa Herbert Malin oo ahaa qunsulkii siyaasadda safaaradda Mareykanka ee Itoobiya, wuxuu kulan la qaatey S. Sinitsin oo ahaa Soviet Conselor Minister in Ethiopia. Malin wuxuu fadhigaas ku caddeeyey in dow
DHAQANKA - QAYBAHA HADALLADA GEEDKA LAGA SOO JEEDIYO
Hadallada geedka laga yiraahdo waxaa ay ahaayeen kuwo xikmad ku fadhiya oo lagu dheehay suugaan. Waxaa ay ahaayeen kuwo ka hufan af-lagaaddada iyo ceyda. Waxaa dhici jirtay in nin geed ka hadlay, eray uu yiri dartiis, inta gar loogu dhigto haddana xaal laga qaato. Hadalku wuxuu lahaa anshax loo yira
DIINTA - SU’AALIHII IYO JAWAABIHII BISHAAN
Diinta - su?aalihii iyo Jawaabihii bishaan Anisa Ali Su?aalihii Bishaan
Marka kowaad waxaa mahad u soo jeedinayaa somalinetka, marka xigta waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo su?\_'aalahaan:
1.	salaadaha sunada waa meeqa? sunada mu\_'akadka ah?
2.	marka quraanka la aqrinaayo oo ku
Fanka Iyo suugaanta - Sheeko Taxane ah: Kulankii Barakaysnaa W/Q: A. Osman Horudhac
Qaybihii hore waxaan la soconay Ayaan iyo Faysal oo akhbaar kala helay, kaddib markii ay in badan kala maqnaayeen. Ayaan oo Australia ku nool wadaad ah, xaas ah, hooyo ah, nin wadaad ahina qabo, nolosha a
FANKA IYO SUUGAANTA: GABAY
Midigtaydiyo bidixdaydu waa, labo mataanoode;
Midi waa martida soora iyo, maato daadihise;
Ila Tali: Walaal waxaan ahay gabar Soomaliyeed oo ku nool waddanka Mareykanka, walaal waxaan xiriir lahayn wiil muddo dhan ilaa 3 sano. kadib arrinteenii wey iska dhamaatay sababa jiray aawadeed mana ahan mida labdeenaba naga timid. Marka walaalayaal kadib markii aan kala harnay oo hadd
Qaybihii hore waxaan soo bandhignay danbiyada waaweyn: Shirkiga, in uu qofku qof dilo, sixirka iyo salaadda oo laga tago, Zakada oo aan la bixin, Bisha ramadaan oo sabab la?aan la afuro, qofka oo aan xajiyin isaga oo awooda iyo Waalidka oo lagu caasiyo.
Danbiga 9aad: Qaraabada o
FANKA IYO FANNAANKA - WARAYSI : LUUL JEYLAANI CALI
Waa qaybtii labaad ee waraysigii aan la yeelanay fanaadda weyn Luul Jeylani
SNM: Dad badan ayaa aaminsan in fanaaniinta Soomaaliyeed ay kaalin mug leh ka soo cayaareen burburk
MA OGTAHAY - WAA MAXAY HOMELAND SECURITY (USA)?
Dhibaatadii loo gaystay dalka Maraykanka bishii September ee sannadkii 2001, waxaa ka dhashay baqdin wayn oo soo foodsaartay shacabka iyo dowladda labadaba. Madaxwayne Bush waxa uu soo bandhigay qorshe cusub oo ah in dib u habayn lagu sameeyo hay?adaha d
ARIMAHA BULSHADA - DHACDO RUN AH: QABIIL BAA DUMIYEY QOYSKEYGII!
Heestaasi ee sida aadka ah ilmada indhaheyga ugu keentay ayaan habeenkii oo dhan ilaa waagu ka baryo ku soo cel celinayey maadama ay heestu aheyd mid si aad ah ii soo jiidatay oo si gaar ahaaneed aad moodid iney ii tilmaameysay.
Waagu markii uu baryey oo qof walbaa sidii ay caadadu aheyd how
SIYAASADA - QARAN IYO QABIIL YAA QADARIN MUDAN? : DOOD FURAN
Soomaalida oo dhaqankoodu ka soo jeedo miyiga ayaa markasta qabiilku waxa uu u ahaa wax ku weyn xaggooda oo aan marnaba laga maarmin, in kasta oo ay markii hore ay u adeegsan jireen hab maamul iyo kala danbeyn. Habkii waagii hore loo adeegsan jiray oo ahaa mid ay dadku ku qasbanaayeen inay raacaan
Qaybihii hore waxaan la soconay qisadii labadii nin oo dilay wiilkii yaraa oo ay abtiga u ahaayeen kaddibna markii ay arkeen in uu madow yahay (una ekayn aabihiis iyo hooyadiis midna) ayna ka baqeen in ceebi uga timaado. Gabadhii 18 jirka ahayd oo jeclaatay odayga 60 jirka ah, kaddibn
FANKA IYO SUUGAANTA - SEETO-U -DHEEREYNTA DHAQANKA IYO CASRIYEYNTA SUUGAANTA
\_"Nearly all literature, in one sense, is made up of guide-books. Old ones tell us the ways our fathers went, through the thoroughfares and courts of old; but how few of those former places can their posterity trace, amid avenues of modern erections; to how few is the old guide-book now a clew! E
Ciyaarihii Toddobaadka Soomaalida oo lagu soo gabagabeeyay (Toronto)
RUMAYSO AMA HA RUMAYSAN - DHACDADII TITANIC!
Markab aad u qurux badan oo baaxad weyn kharash badanina ku baxay dhismihiisa, looguna tala galay in wax walba oo khatar ah aysan isaga wax yeelin ayaa ka soo safray magaalada SOUTHMPTON ee Ingiriiska sanadku markuu ahaa 1898. Isagoo u socda Maraykanka,----- waxaana saarnaa dad lagu qiyaasay 300